Izingane Nezilwane Ezifuywayo Wamukelekile. Ivawusha Yokudla Ifakiwe - I-Airbnb
Izingane Nezilwane Ezifuywayo Wamukelekile. Ivawusha Yokudla Ifakiwe
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Mark And Kate
QAPHELA: Bhukha ngokuzethemba, sikunikeza imbuyiselo ephelele uma imikhawulo ye-COVID-19 ikuvimbela ekuhambeni.
Vula isango elimhlophe bese ungena kuvulandi onomthunzi onezinhlamvu eziningi. Kukhona ukubukeka okusha ngaphakathi, lapho ukulungiswa kukhiqize ikhishi lesimanje negumbi lokugezela elinobhavu ojethiwe. Iphansi lezinkuni kanye neziko zigcina ubuhle bazo bangempela.
Utholakala ebangeni elihamba ngezinyawo lezindawo zokudlela ezidliwayo, izitolo ezinkulu kanye nesibhedlela i-Bendigo uzoba sendaweni ekahle ukuze uzihlukanise ngokuphephile noma usebenze kude nasekhaya.
“Vele upake imoto uhambe uye kunoma yimuphi umcimbi e-Bendigo.”
– Mark And Kate, umbungazi wakho
Pakisha bese ugcwala is'ganga/umbhede wosana, umbhede we-queen, Umshini wokuphephetha esophahleni
4.98 (izibuyekezo ezingu-237)
Ikotishi lisedolobheni lase-Bendigo, ngqo ngaphesheya komgwaqo usuka e-Ulumbarra Theatre. Ukuhamba ngezinyawo okufushane ukuya endaweni yezobuciko kanye ne-CBD—indawo enhle yokubaleka ngempelasonto noma ukuvakashela ngokushesha ithiyetha nemicimbi yezemidlalo yasendaweni.
Ibungazwe ngu-Mark And Kate
UMark And Kate Ungumbungazi ovelele